OoVimba be-NZD-Funda ukurhweba
Iidola kunye neeYen ziqhuba ezantsi, iSterling kunye neNZD zihlala zihleli
Namhlanje, kukho ukuthengisa ngakumbi kwiDola nakwiYen. Ngokunyuka kokulindeleka kokunyuka kwereyithi ye-RBNZ, i-Dola yaseNew Zealand okwangoku yeyona nzuzo inkulu. Ngelixa idola yase-Australia nayo yomelele, iSterling ilawula kancinane umboniso, enkosi ngokuthenga okutsha kwe-Euro. Amagqabantshintshi alumkileyo e-ECB akayincedi i-Euro, nangona isafumana ngokuchasene ne-Dollar ne-Yen ebuthathaka.
UFrançois Villeroy de Gahau, ilungu le KwiBhanki Ephakathi IKomiti yoLawulo kunye noSihlalo weBhanki yaseFrance, uthe ulindele ukuba uqoqosho lwaseFrance lubuyele kumgangatho wangaphambi kobhubhane ekupheleni konyaka. Uvumile ukuba ishishini lezemoto beliqhuba kakubi, kodwa Uqoqosho luqhuba kakuhle. ”
Uye wayigxininisa lonto “Kusekho umahluko omkhulu ekunyuseni amaxabiso ezamandla nakunyuke kwamaxabiso.” Ulindele ukuba izinga lokunyuka kwamaxabiso libuyele ngaphantsi kwe-2% ekupheleni konyaka ozayo. Umzekelo, namhlanje i-European Central Bank ayinasizathu sonyusa inzala kunyaka olandelayo. ” Nangona kunjalo, "sihlala sikuphaphele kakhulu ukunyuka kwamaxabiso," Wongeza. Malunga nomngcipheko wokuba i-Evergrande yase China ibe yiLehman Brothers, uVilleroy watsho "Imbali ayizukuziphinda." "Ndicinga ukuba i-Evergrande ikakhulu yingxaki yase China," wongezelela.
Ixabiso ledola yaseMelika ngokuchasene nengobozi yemali ephikisanayo, njengoko ilinganiswe sisalathiso se-DXY, ibuyile ukusuka kumanqaku angama-93.50 kwaye okwangoku ibaleke yaya kuma-93.80. Ngokubambisana, amaxabiso ase-US ayenyuka, kunye nemilinganiselo yeminyaka eyi-10 ebetha phezulu kwansuku zonke kwipesenti ze-1.642, ene-pivot ye-1.706 yepesenti ebekelwe i-13 kaMeyi. "Izivuno zehlabathi zizinzile kulandela uloyiko lwayizolo," Abahlalutyi bathi kodwa bongeze ukuba ingxoxo yokunyuka kwamaxabiso isekude ukuba iphele, ngenxa yobunzima bokunikezelwa kweenkonzo kunye namaxabiso aphezulu ezinto ezisasazwayo.
Ukulandela amagqabantshintshi ka-Rhuluneli u-Bailey kwimpelaveki, intengiso yase-UK ihambise ixabiso kwixabiso elongeziweyo lokulayisha ngaphambili ukusuka kwiBhanki yeNgilane (BoE), ibangela ukuba uSterling abuyele umgama ochukumisayo wenqanaba le-1.3800. I-Sterling ayisavuni izibonelelo ezizeleyo zokunyuka ngokukhawuleza kwamazinga e-UK. Izolo, imakethi yezinga lase-UK inyuke kakhulu ukuya kwixabiso elipheleleyo lokunyuka ngereyithi yiBhanki yaseNgilani kwintlanganiso yabo elandelayo yomgaqo-nkqubo ngo-Novemba. ”
Ngexesha lomngcipheko omkhulu ngoLwesibini, indawo ekhuselekileyo yedola yaseMelika yabona ukuthengisa okunzulu kwaye kwehla kwiiveki ezintathu eziphantsi. Ngenxa yoko, i-kiwi riskier eyaziwayo yafumana amandla amakhulu, incedisa i-NZD / USD pair yokufumana ukulandelwa okunamandla komhla wesihlanu ngokulandelelana.
tags IDOLI, NZD, Sterling, yen
Iiplamu zeedola kwi-ADP ukusilela njenge-NZD Surges emva kweDatha yeDatha
Idola: Emva kokuba kubuthathaka kakhulu kunoko bekulindelekile kwi-ADP yomsebenzi, ikamva lase-US lisiya emazantsi. Njengoko Imvakalelo yomngcipheko ibuyela kulumkiso, i-yen izuza isixa esikhulu somhlaba. Nangona kunjalo, i-NZD kunye ne-AUD isenamandla kakhulu namhlanje. Idola yeyona mali ilandelayo ibuthathaka kwaye ibonakala ibuthathaka, ngakumbi xa kuthelekiswa nejors zaseYurophu kunye ne-yen.
NgoJulayi, ingqesho ye-ADP e-US ikhule ngama-330 amawaka kuphela, okungaphantsi kokulindelweyo ngabantu abangama-680 amawaka. Ngobungakanani beenkampani, amashishini amancinci ongeze imisebenzi engamawaka angama-91, amashishini aphakathi - i-132 lamawaka, amashishini amakhulu - abantu abangama-106 lamawaka. Icandelo, imisebenzi kwimveliso yempahla inyuke nge-12 lamawaka, nakwicandelo leenkonzo-ngamawaka angama-318.
“Ukubuyiswa kweemarike zabasebenzi kuyaqhubeka nokubonisa inkqubela engalinganiyo, kodwa inkqubela phambili kunjalo. Idatha yomvuzo kaJulayi ibonisa ukwehla okuphawulweyo kokukhula kwemisebenzi xa kuthelekiswa nekota yesibini, ” Utshilo uNela Richardson, uqoqosho oluphambili kwiADP.
“Kwinyanga yesihlanu ngokulandelelana, icandelo lolonwabo kunye nelokubuk 'iindwendwe lelona shishini likhula ngokukhawuleza, nangona ukukhula kuye kwehla kancinci. Ukwehla ekubuyiseni kwakhona kuchaphazele neenkampani zabo bonke ubungakanani. Iibhotile zeJob ziyaqhubeka ukuthintela ukukhula, ngakumbi xa kujongwa iinkxalabo ezintsha malunga ne-COVID-19 enxulumene nokwahluka kwentsholongwane. Le miqobo kufuneka inyamalale kwiinyanga ezizayo, zikhokelela ekukhuleni okuqatha kwenyanga kwikamva. ”
Ukunyuka kweDola yaseNew Zealand emva kweDatha yeNgcaciso yoMsebenzi
Emva kokukhutshwa kweenkcukacha-manani zengqesho zaseNew Zealand zamva nje, idola yaseNew Zealand iye yaqhubeka nokulawula. Izinga le-NZD lenyuke ngaphezulu kwe-0.7050 ngenxa yengxelo. Ingxelo yentengiso yengqesho, ngokweengcali, iqinisekisa iBhanki enguVimba yaseNew Zealand (RBNZ) yokuqikelela izinga lokunyuka.
Ngokwengxelo yakutshanje yengqesho, iqondo lokungabikho kwemisebenzi lehle kakhulu ngokumangalisayo kunokuba bekulindelwe kwi-Q2 ngama-0.6 eepesenti ukuya kwi-4.0 yeepesenti. Sele ilapha ngezantsi kwengqikelelo ye-RBNZ ye-4.7 yepesenti yentswela-ngqesho kwaye inokuba ikufuphi kumanqanaba athathwa njengokuhambelana nengqesho epheleleyo. Kwangelo xesha, ukukhula kwemivuzo kubonakala ngathi kuyaqhubeka. Kwikota yesibini, umvuzo ophambili wenyuka nge-0.7 yepesenti ngonyaka, xa kuthelekiswa neepesenti ze-0.4 kweyokuqala.
I-NZD ifumene ukukhuthazwa kwidatha yemisebenzi eyomeleleyo yaseNew Zealand. Ukulindela ukuba i-RBNZ iya kuqhubeka nokunyusa amaxabiso isekwe kwingcinga yokuba ubhubhane weCovid awunakuphazamisa uqoqosho kwaye unyanzele ibhanki enkulu ukuba ihlehlise ukunyuka kwamazinga. Iziseko zasekhaya zaseNew Zealand zihlala zomelele, njengoko ilizwe lesiqithi lenze umsebenzi obalaseleyo wokwenza imozulu yesaqhwithi iCovid. Okwangoku, kukho inkxalabo malunga nalo bhubhane, ofikelele encotsheni e-Australia kwaye wakhokelela ekumisweni kohambo lokungabikho yedwa phakathi kwala mazwe mabini.
tags IDOLI, NZD
I-Yen ibambe iQinisekile, i-GBP kunye ne-NZD yokuwa ngenxa yokuZithemba kwabatyali mali
Ukuhlaziywa: 21 Julayi 2021
Ngexesha lokubhalwa kwiimarike zemali zanamhlanje, iDollar iye yagqitha kwiYen njengeyona mali inamandla. Ngaphandle kokuphucuka okuthobekileyo, eyona nto kugxilwe kuyo kwiimarike zezemali kuhlala kungazinzanga. Idola yaseNew Zealand okwangoku yeyona imbi kakhulu, kodwa iyafumana abanye; I-Sterling nayo ayinamandla, njengoko i-selloff eminqamlezweni iya isiba nzulu.
Emva kokurhweba ngomngcipheko omkhulu e-US kusuku olungaphambi kolo, ukuzithemba kotyalo mali kuye kwazola. I-yen kunye ne-franc yaseSwitzerland ziye zanikela ezinye zeenzuzo zabo, kodwa zihlala zezona zimali zimbini zinamandla. Iimali zezinto zorhwebo, ezikhokelwa yiDola yaseCanada, zezona zibuthathaka. Okwangoku, idola kunye ne-euro zixubene, zibanjwe embindini. Ukuxhalaba malunga nokuhluka kwe-COVID-19 ye-delta kuya kuqhubeka kukugxila kuko.
Idola yaseNew Zealand (i-NZD / i-USD) ekugqibeleni ilandele ukukhokelwa kwezinye iimali zorhwebo kwaye kwaqhekeka namhlanje. Ngokubanzi, umngcipheko wokuthintela ulindelo lokonyuka kwereyithi yiBhanki enguVimba yaseNew Zealand. Ukwehla ukusuka kwi-0.7463 kujongwa njengokulungiswa kwayo yonke into ephuma kwi-0.5467. Logama nje isithintelo esingu-0.7104 sibambe, imbonakalo iya kuba ye-bearish. Ngaphambi kokugqitywa, injongo elandelayo kukuqikelelwa kwepesenti ye-100 ye-0.7463 ukuya kwi-0.6942 ukusuka kwi-0.7315 kwi-0.6794.
I-Yen ibambe iqinile emva kokuzuza
Ukuthatha inzuzo kunokwenzeka ukuba kudlale indima kwibhidi, xa kuthengiswa kakhulu ekuqaleni kweveki. YeEUR / JPY Kuyakhula njengoko abathengisi bebuyela emva kwintengiso yesitokhwe yaseMelika kwimo yomngcipheko ethe kratya ngolwesiBini.
Ngenxa ye-beta yayo enkulu, umnqamlezo uyaxhamla njengoko abatyali mali beqala ukulinganisa ukuba uloyiko lomnye umjikelo otyumkileyo wokutshixwa kwehlabathi lonke akunakuba nesiseko. Kwelinye icala iinkunzi ziyomelela kwaye zimba kwiinzipho zazo ngexesha lokubhalwa. Oku kungakhokelela kuqhekeko lwenqanaba lokuchasana langoku le-129.50. Ukophula kunye nokugqiba ngaphaya kwe-129.50 kunokuba yinto elungileyo, kusenziwa oku kulandelayo kulwakhiwo.
Kulo nyaka, ukuvuselelwa kwentsholongwane kubonakala kungoyena mqhubi uphambili weentshukumo zorhwebo kwiindawo ezininzi. Ukuphendula kukwanda kwamatyala okwangoku, amagosa aseJapan abhengeze imeko yonxunguphalo eTokyo kwaye athintela ababukeli abavela kwiOlimpiki. I-yen ihambile kwindawo yokutshixa ngamatyala amatsha aseJapan
tags IGBP, NZD
I-Kiwi Dollar inyusa njengeBhanki enguVimba yaseNew Zealand isika iStimulus Supply
Kwakukho ingxelo yeBhanki enguVimba yaseNew Zealand eyathi iyinciphisile inkqubo yayo yokuthenga iibhondi ye-New Zealand yeebhiliyoni ezili-100 ngokukhawuleza. Le ngxelo yenze i-New Zealand Dollar, (eyaziwa njenge-Kiwi Dollar), ukuba inyuke ngexabiso. Kukholelwa ukuba ekugqibeleni oku kuya kukhokelela ekunyukeni kwamazinga enzala kungekudala.
Iprojekthi yokukhuthaza ubhubhane we-COVID-19
Ibhanki enguVimba yaseNew Zealand ibeke amanyathelo afanelekileyo xa i-Covid-19 yayiqala ukuhlasela ilizwe. Ngo-Matshi 2020, amanyathelo abekiwe abandakanya i-NZD ye-100 yezigidigidi yeepasile zovuselelo. Izixa ezikhulu zemali zafakwa kuqoqosho kwaye amaxabiso enzala ancitshiswa kakhulu.
Inkqubo yokuthengwa kweebond nayo yamiselwa iinjongo zayo yayikukuthenga iibhondi zikaRhulumente waseNew Zealand nge-NZD $ 100 yezigidigidi nge-Juni 2020. Ngenxa yoko, kwabakho impumelelo ekunciphiseni ubhubhane weCovid-19 ngaphambili kunokuba bekulindelwe. Uqoqosho luye lwancedwa kukunyuka kwezindlu kunye nenkcitho enkulu kwizinto zentengiso ngabemi. Oku kuye kwenza ukuba uqoqosho lwaseNew Zealand luvuseleleke ngokukhawuleza kunamazwe amaninzi.
Ngo-Meyi ka-2021, i-RBNZ yabamba intlanganiso apho kwakucetyiswa amathuba okonyuka kwenqanaba lenzala ngo-Septemba olandelayo. U-Adrian Orr, irhuluneli ye-RBNZ, nangona kunjalo, uthi ingqesho kunye neenjongo zokunyuka kwamaxabiso ziza kuqala ngaphambi kokuqinisa imigaqo-nkqubo.
Iziphumo zeNgxelo kwiDola yaseNew Zealand
I-RBNZ, inqanaba layo lemali elisemthethweni lisese-0.25%, ke ngoko ithathela ingqalelo ingxokolo yeebhanki zalapha zokunyuka kwangoko kunokuba bekulindelwe kwinqanaba lenzala.
Ingxelo ibangele ukunyuka kwexabiso leDola yaseNew Zealand. Ishukume nge-1.1% ukuya kuthi ga kwi-0.7017 yeedola.
Phawula: Funda2, urhwebo ayisiyo ingcebiso kwezemali. Yenza uphando ngaphambi kokutyala imali yakho kuyo nayiphi na impahla yezezimali okanye imveliso ebonisiweyo okanye umcimbi. Asinaxanduva lakho kwiziphumo zotyalo mali.
tags Izinto ezisisiseko, Kiwi Dollar, NZD, RBNZ
I-NZD iphakama ngokuphendula kwiiNtetho zeHike ze-RBNZ, njengoko i-AUD ihlala izinzile emva kokuKhutshwa kweRBA
Ukuhlaziywa: 6 Julayi 2021
Kwinqanaba le-RBNZ amahlebezi, i-NZD ngumdlali opheleleyo kwiseshoni yanamhlanje. I-NZD ityhalele phezulu idola yase-Australia namhlanje, kodwa eyokugqibela ilahlekelwe ngumhlaba kulandela isigqibo somgaqo-nkqubo weRBA. Nangona kunjalo, idola yase-Australia, kunye ne-Sterling, isabambe uninzi lweenzuzo zayo.
Kwangoko ngemini, idatha evela eNew Zealand ibonise ukuba i-NZIER Business Confidence Index inyuke kakhulu kwikota yesibini, inyuka yaya kwi-7% ukusuka -13% kwikota yokuqala, inika i-NZD ilifti.
Ukonyuka okubonakalayo kokudityaniswa okunesidima kwe-AUD / USD emva kweBhanki enguVimba yase-Australia (RBA) yokuhamba komgaqo-nkqubo we-hawkish nako kuncede ukunyuka kwe-NZD / USD. I-Reserve Bank yase-Australia (i-RBA) yehlise ukuthengwa kweeasethi ngeveki ukusuka kwi-A $ 5 yezigidigidi ukuya kwi-4 yezigidi zeedola ngoLwesibini.
Idola yaseMelika, kwelinye icala, yahlala ikhuselekile njengoko kulindelwe ngaphambili komgaqo-nkqubo weFed owomeleleyo waphela. Ukubetha okukhulu kumxholo ophambili wokuprinta kwe-NFP kwagutyungelwa kukutsiba okungalindelekanga kwinqanaba lokungabikho kwemisebenzi e-US, okuthetha ukuba iFed iyakubamba ukuthothisa ukuthengwa kwayo kweeasethi. Ngenxa yoko, ingqalelo yentengiso iya kutsalwa ekukhutshweni kwemizuzu yangoku yeentlanganiso ze-FOMC ngoLwesithathu.
I-AUD ihlala izinzile emva kokuKhutshwa kweRBA
The Ibhanki ye-Reserve ye-Australia (RBA) Irhuluneli uPhillip Lowe uqaphele kwinkomfa yomgaqo-nkqubo wezemali emva kwengqungquthela ngoLwesibini ukuba "imfuneko yokunyuka kwezinga lemali ixhomekeke kwizibakala, hayi kumhla."
I-AUD / USD iwela kwinqanaba le-0.7600 kwimpendulo ebambezelekileyo kwinkomfa yeendaba kaLowe.
Ngomhla, indawo inyuke ngepesenti ye-0.89. Iinkunzi ze-AUD zibonakala ngathi ziyonyuswa sisizathu sikaLowe sokunciphisa ukuthengwa kweebhondi. Abathengi be-AUD / USD banethemba lokuphinda bafumane ulawulo emva kwekhefu eliqinileyo lomgca wokumelana nenyanga, ngoku uxhaswayo. Esona sikhubekiso sikhulu yi-200-DMA kufutshane ne-0.7600.
Aba babini balwa ngenzuzo yokufumana amandla ngaphakathi ngaphakathi kwaye basilela kufutshane namanqaku ayi-0.7600 ajikelezayo kwakhona. Ukubonakala kokuthengisa okuthe kratya okujikeleze imali ekwabelwana ngayo ukuphendula kwisibhengezo esibi seziphumo zovoto ze-ZEW zanceda idola yaseMelika. Oku kutolikwe njengesizathu esibalulekileyo, esenza ukuba kuthengiswe okutsha kwi-AUD / USD pair.
I-EUR / NZD kabini ephezulu!
I-EUR / NZD ithengiswa kwi-1.6746 emva kokusilela ukuvala ngezantsi komgaqo ophantsi wecala. Esi sibini sime kanye ngaphezulu kwendawo yenkxaso eyomeleleyo.
Ukwahlulwa okufanelekileyo kuphela kule ndawo kungatshintsha uluvo kwaye kungazisa ithuba elifutshane.
Isibini sihamba ecaleni kwixesha elifutshane, yiyo loo nto kufuneka silinde isiqinisekiso ngaphambi kokuthatha inyathelo. I-EUR / NZD ye-downtrend enkulu ihleli inganyangeki emva kokuba inqanaba liprinte iphethini yokuguqula kwakhona ephezulu.
Uhlalutyo lobuGcisa lwe-EUR / NZD H4!
I-EUR / iUSD ime ngaphakathi kwitshaneli yexesha elifutshane. Ukwaphuka okusebenzayo kunye nesezantsi esisezantsi kunokusizisela ithuba elifutshane.
Iphuhlise iphethini yokuguqula iTop ephezulu kwinqanaba le-61.8% yenqanaba lokubuyisela ukubonakalisa intshukumo esezantsi.
Iphethini yokubuyela umva iyasebenza emva kokwehla kunye nokuzinza okungaphantsi kwe-1.6667 yenkxaso emileyo. I-EUR / NZD inyuke kancinci emva kokuzama kwakhona umgca we-median (ML) wefolokhwe yokuhla.
Ukusilela ekubalekeni kwisiteshi esiphakamileyo akusebenzi kwimeko ye-bearish.
Ukulahla kunye nokuzinzisa ngezantsi komgca ophakathi (ML) nangaphantsi kwe-1.6667 kunokubonisa ukwehla okunzulu.
tags TOP kabini, i-eur, eur / nzd, eurnzd, NZD, Uhlalutyo Technical
Ukuphuma kwe-NZD / USD kubuyisela umva!
I-NZD / i-USD iyaqhubeka nokuhlala kufutshane nomgca we-downtrend, kwinqanaba le-0.7030. Ukuqhekeka okuphezulu kunokubonisa umva wokubuyela umva.
Esi sibini sinokuqhubeka sonyuka ukuba i-US Dollar Index iqala kwakhona ukuhamba kwayo emva komhla wayo wexeshana. Idatha yokunyuka kwamaxabiso eMelika inokuba sisigqibo ngomso. I-CPI kulindeleke ukuba inyuke nge-0.5%, ngelixa iCore CPI inokunyuka nge-0.2%.
Ngokuhambelana nokulindelweyo kwedatha okanye okungcono kunokunceda i-USD ukuba iphinde iphinde iphinde iphinde ilawule imarike yemali kwakhona. Ngakolunye uhlangothi, amanye amanani ahluphekileyo angonakalisa idola kwaye angathumela i-NZD / USD ephezulu.
Uhlalutyo lwetshathi lwe-NZD / USD H4!
I-NZD / i-USD icinezela umgca we-downtrend emva kokusilela ukubuyela kwicala eliphantsi langaphambili. Kuyathengiswa nge0.7040 ngexesha lokubhalwa, ukuqhawuka okusebenzayo ngaphezulu komqondiso wokudodobala komqondiso wokubuyela umva.
Esi sibini siqinisekisile ukunyuka kwefoloko ngokuzama kwakhona umgca ongezantsi (LML). Ke, ukuqhekeka okusebenzayo ngaphezulu komgca we-downtrend kunye nokuphakama okuphezulu kubonwa njengethuba lokuthenga.
Inkxaso ibonwa kwi-S1 yeveki (0.6995), ngelixa uxhathiso lumi kwi-R1 yeveki (0.7068).
Ukuqhekeka okungaphezulu ngentla komgca waphantsi kunye ne-R1 kunokubonisa uphawu lokuthenga.
tags NZD, NZDUSD, Uhlalutyo Technical, Umbono woRhwebo, iUSD
I-GBP / i-NZD iphindwe kabini isebenze!
Ukunyuka kwe-GBP / NZD ngexesha lokubhalwa kubekwe kwi-1.9558 xa kuthelekiswa ne-1.9532 esezantsi namhlanje. Okwangoku, isaphulelo sinokuba sesethutyana emva kokuthengisa okokugqibela.
Ngokobuchwephesha, isibini siphuhlise iphethini yokuguqula, ke kulindeleke ukuba sandise ukwehla kwayo. Intshukumo yexabiso libonakalise ukuba i-GBP / NZD inokufikelela kwaye ifikelele kumgangatho omtsha kungekudala.
Uhlalutyo lobuchwephesha lwe-GBP / NZD H4!
Okokuqala, inqanaba liprinte iphethini ePhindwe kabini ngasekunene kwenqanaba le-1.98 yengqondo. Njengoko ubona, ireyithi iphinde yawubamba umgca ophakamileyo ongasentla (UML) oqinisekisa ifolokhwe yokuhla.
Ngoku iye yehla ngezantsi kwe-1.9588 yenkxaso emileyo kwaye phantsi komgca we-pitchfork's sliding line (SL) ubhengeza uxinzelelo oluphezulu.
Iwele ngezantsi kwe-1.9539 yangaphambili iphantsi kwaye iphantsi kwe-S1 yeveki (1.9552). Ukuzinzisa ngezantsi kwala manqanaba kuqinisekisa ukwehla okunye. I-bias iya kuba yi-bearish ukuba nje ixabiso lithengiswa ngaphakathi komzimba wesiteshi.
Ukuhla kwangoku ngezantsi kwe-1.9588 kusebenze iphethini yokuguqula iTop ephezulu. Ukuzinzisa apha ngezantsi kunangaphambili kuqinisekisa ukwehla okuninzi.
tags IGBP, gbpnzd, NZD, IPELA, Uhlalutyo Technical